Xeer hoosaadka Baarlamaanka DFS in wax laga bedelaa ma fikir siyaasadeedbaa mise mid Golaha ka yimid? – Madal Furan
Hoy > Warka > Xeer hoosaadka Baarlamaanka DFS in wax laga bedelaa ma fikir siyaasadeedbaa mise mid Golaha ka yimid?
Xeer hoosaadka Baarlamaanka DFS in wax laga bedelaa ma fikir siyaasadeedbaa mise mid Golaha ka yimid?
Muqdisho (Madal Furan) – Waxaa maanta la filayaa in magaaladda Muqdisho ay Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku yeelan doonaan kulan looga hadli doono arrimaha la xiriira ka doodista Xeer Hoosaadka Baarlamaanka.
Qaar ka tirsan Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa u muuqda kuwa dabada ka riixiya in qodobo ka mid ah Xeer Hoosaadka Baarlamaanka DFS ay ku dhaqmaan wax laga bedelo.
Ilaa iminka lama oga qodobada ay Xildhibaanadaasi ay diirada ku hayaan bedelkooda iyo qoddobada cusub ee lagu bedli doono, waxaana duba abuurmay shaki muujinaya in Xukuumadda DFS ay adeegsaneyso gacmaha Xildhibaanada qaarkood si looga mira dhaliyo in meesha laga saaro awooda Xeer Hoosaadka Baarlamaanka ee wiiqaya qunyar socodnimada Xukuumadda DFS.
Waxaa jira Xildhibaano sida Fiinta uga qaayliyey ajandaha looga doodadyo in wax looga bedelo Xeer hoosaadka Baarlamaanka DFS, waxaana ka mid ah Xildhibaan Sakariye Maxamuud X. Cabdi, wuxuuna ugu baaqay Xildhibaanada inay ka feejignaadaan inay ogolaadaan in xeer hoosaadka wax laga bedelo maadaama qodobo gaar ah la bartilmaadmeedsanayo.
“Annagu wax waa garan karnaa, dad iskool galay nahay oo jaamacado ka baxay, dad wax badan shaqeynayay baa nahay, xeer hoosaadkan waa bartilmaameed waxaa la abaaray meelaha baarlamaanka ka dhaq dhaqaaqo, hadaad idinka garan weydaan hadaad iska mootisaan, aniga qof ayaa ka ahay, xasaanadii Baarlamaanka waxaa la geliyay calaamad su’aal.” Ayuu yiri Mudane Sakariye
Arrintu siday doonto ha ahaatee, Kulanka maanta ayaa waxaa shir guddoomin doono Guddoomiyaha Baarlamaanka Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa waxa ay xildhibaanada kaga doodayaan wax ka bedelka xeer hoosaadka baarlamaanka.
Waxaa aad loo adkeeyey amniga xarunta Baarlamaanka DFS iyadoo ciidamada ka tirsan Boolisku ay xireen xireen dhamaan jidadka u dhaw xarunta baarlamaanka, waxayna si adag u baarayaan gaadiidka iyo dadweynaha isticmaalam wadooyinkaas.
Muxuu Madaxweyne Farmaajo kala kulmay Hogaamiyayaasha Ugaandha, Itoobiya iyo Jabuuti.
Daalo Airline iyo Jubba Air oo is difaacay.
Lafta-gareen oo ka jawaabay martiqaadkii Deni oo gaaray Garoowe.